Ukudinwa Kwamakhasimende | Martech Zone
NgoLwesihlanu, January 11, 2013 NgoLwesihlanu, January 11, 2013 Douglas Karr
Ucwaningo luyindlela ebucayi yokuthwebula imininingwane esemqoka kumathemba akho nakumakhasimende, kepha futhi ingaba ithuluzi elisetshenziswe kabi futhi linikezela ngemininingwane ehambisa ibhizinisi lakho ngendlela engafanele. Njengesibonelo esilula, ukube bengiyibhizinisi futhi ngibuza ukuthi ngingayithuthukisa kanjani iwebhusayithi yami, sengivele ngibeka okulindelwe nomuntu owenza inhlolovo ukuthi kukhona okumele kwenziwe ukuthuthukisa iwebhusayithi… kanti empeleni iwebhusayithi kungenzeka ukuthi wenza kahle.
Ukungakhulumi iqiniso lokuthi wonke umuntu ubonakala ezama ukudonsa abathengi namabhizinisi ngemininingwane namuhla ukuthuthukisa izinhlelo ezihlukanisayo nezikhombe ngobunono obuthuthukisiwe. Isikhukhula sezicelo empeleni sinomthelela embonini… abathatha inhlolovo baphelelwa yisineke.
Abaphendulile kwinhlolovo yakamuva (kumele kube nehlaya elihle lapho endaweni ethile) bathi izinhlolovo zinde kakhulu, zinabantu uqobo, futhi aziphazamisi. Izinkampani ezingaphezulu zicela amakhasimende ukuthi azigcwalise kakhulu kunanini ngaphambili. Kusuka kuZendesk I-infographic: Impendulo Ukukhathala
Yini okufanele yenziwe ngabakhangisi? Thatha isimilo kunokucela ulwazi lapho kungenzeka khona. Nciphisa imvamisa yocwaningo bese wehlisa inani lemibuzo. Zama ukwenza ucwaningo lapho ufaka khona umbuzo ngasikhathi bese usebenzisa izimpendulo ezilula kunokucela ulwazi olunwetshiwe.
Tags: inhlolovo yamakhasimendeimpenduloukuphathwa kwempenduloUcwaningoUkuhlola
I-Plurro iletha i-Cash Mob ebhizinisini lakho lasekhaya lokuthengisa
Jan 12, 2013 ngo-12: 23 PM
Impendulo yomsebenzisi ibaluleke kakhulu, kepha kuba nzima ukukuthola. Ngingathanda kakhulu ukufunda ngokusebenza kwesayithi ngocwaningo kunokuthengisa, noma ukuntuleka kwalo.
Jan 14, 2013 ngo-9: 37 PM
Linganisa lokho abantu OKWENZA NGEMPELA - hhayi lokho abacabanga ukuthi bakwenza uma ubakhathaza ngenhlolovo.